Kuthulwe uhlelo lokuchela izindawo zomphakathi ngezibulala magciwane ukulwa neCOVID-19 - Amajuba District Municipality
Kuthulwe uhlelo lokuchela izindawo zomphakathi ngezibulala magciwane ukulwa neCOVID-19
UMphathiswa Nomagugu Simelane-Zulu wethule uhlelo lokuchelelwa kwezindawo eziyimikhukhu ngobuthi obubulala amagciwane. Lolu hlelo luyingxenye yezinhlelo zikaHulumeni zokulwisana nokusabalala kwegciwane le-COVID-19. UMphathiswa Simelane-Zulu wethule lolu hlelo eSiyahlala La kanye naseH39 ngaphansi koMkhandlu waseNewcastle ngomhla zi-3 kuMay 2020.
Lolu hlelo luqhutshwa ngokubambisana noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu kanye nowezoLimo. Le minyango idlala indima ebalulekile iqeqesha amavolontiya okuyiwona azahambela lezi zindawo ezinyangeni ezimbili ezizayo echela ngobuthi. UMnyango wezeLimo yiwona ohlanganise ubuthi obubulala amagciwane waphinde waqikelela ukuthi lo buthi abuyona ingozi kubantu, izilwane kanye nemvelo.
UNkosikazi Simelane-Zulu uqale usuku ngokuthi ahlangane nalamalontiya ukuwabonga ngokuthi abe yingxenye yomkhankaso wokulwisana naleli gciwane elihlasele umhlaba wonke.
UMphathiswa Simelane-Zulu obephelezelwa wuMeya woMkhandlu Amajuba, uKhansela Dkt Musa Ngubane, uSekela Meya uKhansela Sipho Nkosi, uDkt Ngubane oyiNhloko yoMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kanye namalunga e-District Command Team.
Lolu hlelo luhlonzwe yiProvincial Command Team njengenye yezindlela zokulwa naleli gciwane ikakhulukazi ezindaweni la imiphakathi ihlala ngokusondelana kakhulu khona kanye nasezindaweni zomphakathi ezifana nama-taxi ranks kanye nasezinxanxatheleni zezetolo.
Imikhandlu yonke kubhekwe ukuthi iluqhube lolu hlelo kodwa okubalulekile ukuthi lungabi nje yinto eyenzeka kanye kuthathwe izithombe bese kuphela kanjalo. Kumele kube nezinhlelo zokuchelela lezi zindawo iviki neviki ukuze siqiniseke ukuthi leli gciwane uma kwenzekile lawela kulezi zindawo liyafa.
Ngaphezu kwalolu hlelo uNkosikazi Simelane-Zulu uphinde wakhumbuza ebebekhona kwethulwa lolu hlelo ukuthi impi yokulwisana naleli gciwane isenkulu futhi isadinga wonke umuntu ukuthi afake isandla. “Kumele siqikelele ukuthi kuba nezivimbamgwaqo ukulawula ukuhamba kwabantu ikakhulukazi njengoba sesisegabeni sesine seLockdown la abantu bezothola khona ithuba lokuthi bahambele izindawo ezahlukene. Nohlelo lwethu lokuhlonza nokuhlolela leli gciwane kumele siluqinise ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kuzothi ukuba nesiphithiphithi”, kubeka uMphathiswa Simelane-Zulu.
Unkosikazi Simelane-Zulu uphinde waveza ukungathozi kwakhe ngokwanda kwenani Labantu abahambela emadolobheni nasezindaweni eziyizitolo. Ugcizelele ubungozi obungavela uma abantu beba budedengu beba sezixukwini. Unxuse amaphoyisa ukuba enze umsebenzi wawo ukulawula ukuhamba kwabantu nokunqanda labo abaphula imithetho.
Uhlelo lokuchelela eSiyahlala kanye naseH39 luqhubeke kahle kwaphindwe kwathulwa namavolontiya azoqhuba lolu hlelo. Umphakathi obuhanjelwa emakhaya uphinde wafundiswa ngaleli gciwane kanye nangemigomo ye-Lockdown.